Ikhaya IZITOLO EZIZWELONKE ZOKWENZA IFOOTBALL Abadlali bebhola lebhola lesiNgisi Amaqiniso we-Reiss Nelson Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso
I-LB ibonisa iNdaba ephelele ye-Football Genius eyaziwa kakhulu negama elithi "Reiss“. Indaba yethu yeReiss Nelson Childhood Story Plus ye-Untold Biography ikulethela i-akhawunti ephelele yemicimbi ephawuleka kusukela ngesikhathi sakhe sobuntwana kuze kube manje.
The Life and Rise of Reiss Nelson. Isikweletu kumaSkySports kanye I-Arsenal FC
Ukuhlaziywa kufaka phakathi impilo yakhe yobudala & nesizinda somndeni, imfundo nokwakha ikhono, impilo yakhe yokuqala, impilo yangaphambi kodumo, ukuvuka udumo ngodaba, ubuhlobo, impilo yomuntu siqu, amaqiniso omndeni kanye nendlela yokuphila njll.
Yebo, wonke umuntu uyazi ukuthi ungomunye walezi zingane ezimnandi ukuba ziphume esikhungweni semfundo ephakeme i-Arsenal. Kodwa-ke, bambalwa kuphela ababheka i-biography kaReiss Nelson futhi ethakazelisa impela. Manje ngaphandle kokuqhubeka, ake siqale.
Amaqiniso we-Reiss Nelson Childhood Story Plus ne-Untold Biography - Imvelaphi Yokuphila Nokuqala Komndeni
Kuqala, amagama akhe aphelele nguReiss Luke Nelson. UReiss Nelson wazalwa ngosuku lwe-10th ngoDisemba 1999 kubazali bakhe- ubaba waseZimbabwe kanye nomama ongumNgisi endaweni eyi-Central London endaweni yaseNdlovu naseCastle, eNgilandi.
UReiss Nelson akakhuliswa emndenini ocebile. Futhi, yena wayengeyena lowo hlobo lwengane enabazali bayo ababekwazi ukumnika amaqoqo amasha wamathoyizi ngaphandle kwebhola.
UReiss Nelson wakhula eceleni kwabazali bakhe kanye nomfowabo omdala e-Aylesbury Estate. Isakhiwo esivelakancane esifanekiselwa ngezansi singumhlaba okude (sihluke ngokuphelele) kwizifunda zezimali ezikhuphukayo ezibusa isibhakabhaka saseLondon.
Le yi-Aylesbury Estate lapho kwakhulela khona uReiss Nelson. Isikweletu kumaSkySports
Amaqiniso we-Reiss Nelson Childhood Story Plus ne-Untold Biography - I-Education ne-Career Buildup
Ukuze kuthunyelwe izingibe zeqembu lezigelekeqe nobugebengu bemimese, abazali baseReiss banquma ukuthumela indodana yabo eLondon Nautical School eduzane naseWaterloo. Phambilini, bekungakaze kube nokungabaza okukhulu ukuthi uNelson wayeqonde ngqo. Wayengumfana okhaliphile futhi owayesebenza ngokubambisana nezifundo zombili futhi edlala ibhola ngemuva kwamahora esikole.
Ngokuqondene nezinto ezenziwa esikoleni, uReiss akazange aphelele ngaphandle kokuba nomngane wakhe omkhulu ayedlala naye ibhola. Lowo mngane omkhulu kwakungekho omunye umuntu ngaphandle kwakhe UJadon Sancho- Awu yebo, uzwile lokho !. I-Sancho nabazali bakhe ababehlala eGuinness Trust Buildings eduzane naseKennington Park bekulokhu kungumngani omkhulu kaReiss kusukela ezinsukwini zabo zobuntwana.
Uthi bewazi?… Kwakungale nkantolo yebhola likakhonkolo lapho uReiss Nelson nomngane wakhe omkhulu I-Sancho ahlonipha amakhono abo njengabafana. Le ntuthuko ibabone bemenyelwa eMqhudelwaneni wezingane waseLondon Southwark.
Bobabili uReiss Nelson noJadon Sancho babengabangani Abakhulu Kunabo Bonke Ubuntwana. Isikweletu kumaSkySports
Ngokusho kweSkySports. Kusihlwa ekwindla ebanda eningizimu London, bobabili abafana (I-Sancho noReiss Nelson) badlale kulo mncintiswano bamangala abalandeli. UHolmes-Lewis, umqeqeshi webhola kanye nomeluleki wake wavuma konke akubonile;
"Lapho ngifika emgodini, ngabona le ngane igxaza i-30-egcekeni bese idlula komunye umgwaqo umfana (uJadon Sancho) oyivolume wayibuyisela ngqo kuye. Ekuphenduleni, ngabamba ngokushesha abaqeqeshi bami ababili, uCedric [Kobongo] no-Ahmet [Akdaj], ngathi, Ngabe ukubonile lokho kuqonda nge-telepathic? Lokho bekuhlanya !!"
Bobabili uReiss Nelson noJadon Sancho bagcina belekelele iqembu labo ukunqoba umncintiswano, okuyinto eyayijabulisa uHolmes-Lewis.
UReiss noSancho eMqhudelwaneni Wezingane waseLondon Southwark. Isikweletu kumaSkySports
Amaqiniso we-Reiss Nelson Childhood Story Plus ne-Untold Biography - Ukuphila Okuqala Kwomsebenzi
Ukuphumelela ebholeni lakuleli kwathola uReiss Nelson ucingo eMonshot, isifundi sentsha sendawo endaweni yakhe. Ngesikhathi elapho, wahlaselwa yiTottenham. UReiss ubeseTottenham inyanga eyodwa ngaphambi kokuthi kufike ucingo olungenakuphikiswa oluvela e-Arsenal. Umngani wakhe omkhulu uSancho naye uthole ucingo oluvela kwaWatford.
Isifiso sobabili Reiss futhi I-Sancho okwenzelwe ibhola wababona ngonyaka we-2007, bedlula ekuvivinyweni futhi bangena ekusethweni kwe-academy ye-Arsenal neWatford ngokulandelana. Ukuqala impilo yakhe esikhungweni semfundo ephakeme kwakungelula kuReiss. Ngaleso sikhathi, wayevuka ekuseni ukuze ayolanda isitimela siye eCatford eceleni komfowabo omdala. Lokhu wakwenza kathathu ngesonto.
Alikho ibanga lendawo noma ukuphela kwesikhathi kunganciphisa ubungani phakathi kukaReiss noSancho. Kuthathe kuphela imizuzu ye-38 ngesitimela nemizuzu ye-52 ngemoto yabo bobabili abafana ukuba babonane. Eminyakeni engu-14, cishe ngoMashi 2015, UJadon Sancho wathuthela eManchester City. UReiss Nelson uqhubekile nokwenza inqubekela phambili ne-Arsenal njengoba yena wanyusa izintambo ngokushesha okukhulu.
Amaqiniso we-Reiss Nelson Childhood Story Plus ne-Untold Biography - Umgwaqo oDumela Igama
Ngemuva kokuncintisana ngeziqu zemfundo ephakeme, uReiss wanikezwa inkontileka yakhe yokuqala yobungcweti U-Arsene Wenger ngosuku lwakhe lokuzalwa lwe-17th. Embhikishweni wokuthola isikhathi sokudlala, uReiss wenze isinqumo esibucayi ngomsebenzi. UJadon Sancho oshiye ngaphambili eBorussia Dortmund eGermany weluleka umngani wakhe omkhulu uReiss ukuthi ahlanganyele naye kwiBundesliga yaseGerman.
UReiss Nelson uthathe isinqumo sokulandela ezinyathelweni zabangani bakhe abahamba phambili ngokuboleka imali ayodlala ne1899 Hoffenheim, iklabhu yaseGerman esigabeni sokuqala saseGerman. NjengoBorussia Dortmund we UJadon Sancho, UHoffenheim uphinde wanika uReiss Nelson ipulatifomu yokukhombisa ithalente lakhe.
UReiss Nelson wake wahlonishwa njengomuntu ohamba phambili ngokushaya amaNgisi kusukela e-Europe ngamaphuzu we-6 emidlalweni ye-7, washaya wonke amaminithi we-54 ngokwesilinganiso. Njengoba kuphawulwe ngezansi, hhayi I-Raheem Sterling noma Harry Kane kungakushaya lokho.
Rees Nelson Road to Fame Indaba. Ikhredithi ku- Standard
Amaqiniso we-Reiss Nelson Childhood Story Plus ne-Untold Biography - Ukuphakama Kumlando Wendaba
Ithonya likaNelson eHoffenheim limenze wanyuselwa ku-U21s yase-England. Kwabuye kwaholela Unai Emery ukubeka ukukhunjulwa kwasekuqaleni kwengane. Lezo zici ayenazo- ukuzethemba, isilinganiso somsebenzi kanye nokuzimisela - obebonakala eHoffenheim manje usemkhonze kahle ne-Arsenal.
Rees Nelson Rise to Fame Indaba. Isikweletu kumaSkySports
UReiss Nelson owaba ngumdlali we844th ukumela iqembu lokuqala lase-Arsenal ngaphandle kokungabaza kufakazelwe kubalandeli uyisithembiso esihle esilandelayo sesizukulwane seklabhu sase-English. Abanye, njengoba besho, manje umlando.
Amaqiniso we-Reiss Nelson Childhood Story Plus ne-Untold Biography - Ukuphila Ubudlelwano
Ngokunyuka kwakhe ekubeni nodumo, kungenzeka ukuthi abanye abalandeli be-Arsenal kumele ngabe bacabangile ngesimo sakhe sobudlelwano lokhu ebuza umbuzo; 'Ngubani intombi kaReiss Nelson?'. Yebo!, Akukho ukuphika amaqiniso wokuthi ukubukeka kwakhe okuhle kuhlangene nesitayela sakhe sokudlala bekungeke kumenze ahehe abalandeli abangamahloni.
Ngubani intombi kaReiss Nelson. Isikweletu ku-IG
Njengasikhathi sokubhala, uReiss Nelson akakashadi futhi ubonakala egxile emsebenzini wakhe. Uma siqhathanisa nendlela yakhe yokuphila yamanje yesikhunta, kubonakala sengathi uReiss uyilo ilungele ukuhlangana. Minat kungenzeka ukuthi angaba nentombi kepha ale ukwenqaba ubuhlobo naye, okungenani okwamanje.
Amaqiniso we-Reiss Nelson Childhood Story Plus ne-Untold Biography - Ukuphila Personal
Ukwazi impilo yomuntu siqu kaReiss Nelson kungakusiza uthole isithombe esingcono somuntu wakhe. Ukuqala, ungumuntu opholile othanda ukukhombisa ukuthobeka phakathi nodumo lwebhola lanamuhla lebhola.
Ukwazi i-Reiss Nelson Life Life. Isikweletu ku-IG
UReiss Nelson ngumuntu okwazi ukuguqula imicabango yakhe enze isenzo sikakhonkolo futhi uzokwenza noma yini ngokomuntu ukufeza izinhloso zakhe.
Amaqiniso we-Reiss Nelson Childhood Story Plus ne-Untold Biography - Ukuphila Komndeni
UReiss Nelson, yize ezalwe eNgilandi usazithanda kakhulu izimpande zakhe zaseZimbabwe. Ngokwalokho okubonakala, uyise, umama nomfowabo omdala bonke benze izinqumo eziqondileyo zokungafuni ukuqashelwa ngumphakathi.
Ubaba kaReiss Nelson: Kuncane kakhulu okwaziwayo ngobaba wakhe waseZimbabwe, ngisho negama lakhe. Kodwa-ke, ngokusho kwewebhusayithi yaseArsenal, uReiss unika kanye ubaba wakhe amakhredithi athile okumgcina eqinile.
Umama kaReiss Nelson: Uma ucabanga ngezinsuku zakhe zobuntwana, enye yezinkumbulo ezinhle kakhulu zikaReiss yilezi ezithinta umama wakhe. Manje yisikhathi lapho azosebenza kanzima ukuze amthengele Therry kaHenry Amajezi ayewagqoka nsuku zonke esikoleni, emaphathini futhi edlala esigodini. Ngezansi kunesithombe sabo bobabili umama nendodana abanobhontshisi we-pasisonate.
UReiss Nelson ubanga umama wakhe. Isikweletu ku-IG
Izingane zikaReiss Nelson: Ngokuvumelana ne Iwebhusayithi ye-Arsenal, Umfowabo kaReiss Nelson umdala udume ngokudela impilo yakhe yezenhlalo ukuze asize umfowabo omncane afezekise iphupho lakhe. Umfowabo omdala osalokhu engaziwa (igama-elingaziwa) wadela kakhulu ukuze athole uReiss lapho ekhona namuhla.
Lapho njalo uReiss eya emaphathini ngobusuku bangoLwesihlanu, umfowabo omdala wayeqikelela ukuthi uthola ukuphumula okwanele ngaphambi kokuqala kwempelasonto. Ubhuti wakhe umdala naye ubezohamba naye abuyele esitimeleni ayonikeza izinkulumo zezifundo, afike afike sekwedlule isikhathi.
Amaqiniso we-Reiss Nelson Childhood Story Plus ne-Untold Biography - LifeStyle
UReiss Nelson ngumfana othanda ubumnandi ojabulela ukwenza, ukusebenzisa imali yakhe nokuphila impilo yakhe ngokugcwele. Kwesinye isikhathi ukhetha ukuhamba ngama-jet-skies amaza olwandle kunokuba nemoto yakhe emigwaqweni. Lokhu kufingqa indlela yakhe yokuphila eyingqayizivele.
Amaqiniso we-Rees Nelson Lifestyle. Isikweletu ku-IG
Amaqiniso we-Reiss Nelson Childhood Story Plus ne-Untold Biography - Amaqiniso angaziwa
Abangani Bakhe Abakhulu: Asides UJadon Sancho, UReiss unabangani bakhe abakhulu abango-Eddie noJoe. Bonke abafana badlula emaqenjini e-Arsenal academy bephumelela emisebenzini yabo.
Ukwazi Abangane Abakhulu bakaReiss Nelson. U-Eddie (kwesobunxele) noJoe (Kwesokudla).
Izinkolo: Igama eliphakathi likaReiss Nelson “Luka”Phakamisa ukuthi ungumKristu ngokwenkolo futhi mhlawumbe uthambekele enkolweni yamaKatolika. 'Luka'wayengumbhali weZenzo zabaPhostoli futhi igama leVangeli lesithathu eTestamenteni eNtsha.
QAPHELA QAPHELA: Siyabonga ngokufunda iReiss Nelson yethu Yobuntwana Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso. At LifeBogger, silwela ukunemba nokulingana. Uma uthola into engabonakali kahle, sicela wabelane nathi ngokuphawula ngezansi. Sizohlala sibazisa futhi sihlonipha imibono yakho.